५.७१% बोनस सेयरमा मूल्य समायोजनपछि मञ्जुश्रीको कतिमा खुल्यो कारोबार ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » ५.७१% बोनस सेयरमा मूल्य समायोजनपछि मञ्जुश्रीको कतिमा खुल्यो कारोबार ?
काठमाडौ - मञ्जुश्री फाइनान्सको ५.७१% बोनस सेयरको मूल्य समायोजन गरेको छ । बोनस समायोजनपछि मञ्जुश्रीको पहिलो कारोबार १२२ रुपैयाँ ९८ पैसालाई आधार मानेर कारोबार खुलेको छ । यसको औसत आधार मूल्य १३६ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ । मञ्जुश्री फाइनान्सले असार २० गते हुने साधारण सभाका लागि सोमबार देखि बुक क्लोज गरेको छ ।
सभा थापागाँउ ब्यांकेट, नयाँ बानेश्वर काठमाडौंमा बिहान १० बजे सुरु हुनेछ । कम्पनीले ५.७१% बोनस र कर तिर्न ०.३२% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पेश गर्नेछ । मञ्जुश्रीले बोनस प्रयोजनका लागि ४ करोड ३४ लाख ६२ हजार ७१० रुपैयाँ र नगद लाभांशमा २२ लाख ८७ हजार ५११ रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । हाल मञ्जुश्रीको चुक्ता पुँजी ७६ करोड ५ लाख ९७ हजार ५०० रुपैयाँ छ । बोनस वितरण पछि चुक्ता पुँजी ८० करोड ४ लाख ६० हजार २१० रुपैयाँ पुग्नेछ ।
प्रकाशित : Monday, June 18, 2018
गल्ती महसुस गरेकोमा धन्यवाद पशुपति शर्मा ! तपाईंले गल्ती गर्नुभएकै हो, स्वीकार्नुभो, राम्रो भो !
क्याडबरी चकलेटमा सुँगुरको बोसो हालेको भेटियो !
२४ बर्षीय ठिटाहरुको 'स्टार्टअप बिजनेश' चिया घर : काठमाडौँमै 'मट्का' चियाको स्वाद...! (भिडियो)
पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पढ्न मन नै लाग्दैन ? यस्तो छ यो समस्याको समाधान !
खानुहोस् यी ५ खानेकुरा, चश्मा कहिल्यै लगाउनु पर्दैन !
यी हुन् सार्है बुद्धिमानी मानिसमा हुने ३ सार्है नराम्रा बानीहरु ! एक पटक हेरेर आफ्नो मुल्यांकन गर्ने कि !
कर्मचारीमाथि नेको इन्सुरेन्सको 'लुट' ! जागीर छोड्दा अवैध रकम असुली, नियामक रमिते ! (प्रमाणसहित)